Mahamasina: FAIR-PLAY, fiantsoana ny mpanao politika rehetra
AccueilA la uneLatest Newsflash Madagate video et affiche EditorialEntreprendre Communiqué Interview En bref Technologies Communauté Malagasy PolitiqueDossier Analyse Monde malgacheArticles Portrait Reportagesphotos Manifestation Environnement Publi reporatge Annuaire Contact Home Reportages Manifestation Mahamasina: FAIR-PLAY, fiantsoana ny mpanao politika rehetra
Mahamasina: FAIR-PLAY, fiantsoana ny mpanao politika rehetra	Jeudi, 28 Février 2013 20:55	Manifestation	Ny sary rehetra mandravaka ity lahatsoratra ity dia nalaina teo Mahamasina, tamin'ny Alakamisy 28 Febroary 2013. Mbola ho avy ny vidéos mirakitra ireo tranga niseho tamin'io andron'ny tsena io. Mahareta kely, Tompoko, aza fady.
Nisy ny tonga, nisy ny tonga tara, fa mbola betsaka ny mety ho avy. Fi'zay tsy tonga kosa, dia aleho hitan'ny havany eo satria dia tsy afaka hifanaraka afa-tsy amin-dry zareo samy irery. Dia hitan'izao tontolo izao iza marina ireo mpanao politika ireo... Raharaha malagasy ity ka dia natao amin'ny teny Malagasy. Mbola tsy lazaina eto ny anaran'ireo eo amin'ny sary. Tsy ho fantatrareo ve e ?
Vonona hifanandrina amin’ireo mpikatroka politika ny ekipan-Drajao amin’ny lalao baolina kitra « Grand match de FAIR-PLAY ». Taorian’ny fandresena indroa misesy nifandonan’ireto ekipan’ny "Malok’ila" ireto, tamin’ireo tompon’andraikitra ara-panjakana sy tsy miankina tany Makajanga sy Toamasina, dia naneho fahavonana indray izy ireo hampiakatra an-kianja ireo mpanao politika tsy an-kanavaka, ka sahy hifandray Tanana, ny Alahady 10 mars 2013 etsy amin’ny Kianjaben’ny Mahamasina. Ny « Grand Match de FAIR-PLAY » dia hetsika ara-panatanjahan-tena vaovao novokarin’ny SCOOP digital mba hanomezana fialam-boly hafa noho ny fahita mahazatra. Nahitana fahombiazana tokoa izy ity, satria maro tamin’ireo mpankafy Malok’ila sy mpitia baolina kitra no tsy tafiditra tany Mahajanga sy Toamasina.
Azo antoka arak’izany fa ho hipok’olona indray Mahamasina amin’ny 10 marsa izao, satria ankoatran’ny lazan’ny mpilalao sarimihetsika ao amin’ny Malok’ila dia ahaliana ny mpijery ihany koa ny ahita ireo mpanao politika handrafitra ekipa iray ka hiaro tsatokazo iray ho fanehoana ny « FAIR-PLAY ». Ankoatra ireo mpanao politika dia hifampitady amin’ny mpilalao sary mihetsika vehivavy ihany koa amin’io fotoana io, mandritra ny lalao fanokafana, ireo vehivavy mpiangaly ny mozika mafana. Ireto farany moa izay hita ho tena manana tanjaka, raha tsy hiteny afa-tsy ny fahitana azy ireo eny an-tsehetra. Tsy nikoso-maso manoloana izany koa ry Raly sy ny ekipany, satria efa niroso tamin’ny fanazaran-tena izy ireo. Scoop digital sy Jeannot RAMAMBAZAFY (Sary), niampy an'i Ravelo
Mis à jour ( Lundi, 04 Mars 2013 12:09 )